बैंकिङ मर्जर : हल्लाको खेतिमात्रै « Karobar Aja
के छ हालको मर्जर अवस्था ?
करोबारआज प्रकाशित मिति : 10 April, 2021
बैंकिङ क्षेत्रमा विग मर्जरको कुराले बहस पाइरहेका बेला केही बैंकवित्त भने मर्जरमा नजाने गरी अघि बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो समय जनता बैंक र ग्लोवल आइएमई बैंक मर्जर भएपछि ठुला बैंकहरुको साखमा प्रश्न उठेपछि मर्जरको रस्साकस्सी नै चलेको हो । केही वर्षदेखि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द चर्चा र जनचासोको केन्द्रमा छन् । शाखासञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामर्थ्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भईकन पनि सामर्थ्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिएको छ । यी दुई प्रक्रियामार्फत नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो नीतिअनुरूप ढिलो–चाँडो बैंकहरूले यो प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुनै छ । बैंकहरूले स्वयम् निर्णय लिन नसकेमा नियामक निकायले नै ‘फोर्स मर्जर’ गराउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले साना तथा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसन बाध्यात्मक बनाएको छ । यो बाध्यताको फाइदा उठाउँदै ठूला बैंकले सानालाई भरसक कम मूल्यमा एक्वाएर गर्न खोज्ने, एउटा संस्थासितको छलफलको निष्कर्ष ननिस्किँदै अन्य संस्थासित छालफल बढाउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।अर्कोतर्फ ठूला तथा मजबुत व्यापार भएका बैंकहरू भने आफ्नो साख जोगाउने चुनौतीसित जुधिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो साबिकको ताज जोगाउन अन्य वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न चाहन्छन् । साना बैंक सम्मानजनक मर्जर/एक्विजसनका लागि हात बढाइरहेका छन् भने ठूलाको ध्यानसाना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्नुमा छ ।
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको ‘बिग मर्जर’देखि नै चुक्तापुँजी र शाखासञ्जालको हिसाबले पछि परेका केही मजबुत बैंकहरू मर्जर वा एक्विजिसनका लागि उपयुक्त संस्थाको खोजीमा छन् । पछिल्लो समय मजबुत इतिहास र आधार भएका दुई वित्तीय संस्था नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया निष्कर्षउन्मुख भएको चर्चाले नबिल, एनआइसी एसियालगायत बैंकहरूलाई तताएको छ । इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जरले सबैभन्दा ठूलो पुँजीको सुदृढ बैंक निर्माण गर्ने हुँदा आफ्नो साबिकको ताज गुम्ने डर यिनीहरूमा छ । त्यसैले उनीहरूपुँजी र आकार वृद्धिको कसरतमा छन् ।
मर्जर वा एक्विजिसनलाई लिएरयतिवेला नबिल बैंकबारे धेरैको उत्सुकता छ । नबिलसँग नाम जोडिएकै भरमा पुँजीबजारमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल आउने गरेको छ । कारण, नबिल लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको मजबुत बैंक हो ।नबिलले बोसनबाटै निरन्तर पुँजी वृद्धि गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक (आव २०७६/७७) मात्र बैंकले बोनसमार्फत ३३.५ प्रतिशत पुँजी वृद्धि गरेको छ । बोनसपछि बैंकको चुक्तापुँजी करिब साढे १३ अर्ब पुगेको छ । द्वितीय बजारमा हाल वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य भएको बैंक नबिल नै हो ।
यतिवेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर रहरभन्दा बढी बाध्यता बन्दै गएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ढिलो–चाँडो अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । साना तथा कमजोर बैंकहरूलाई मर्जर प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्दै वाणिज्य बैंकको संख्या आधामा झार्ने नीति केन्द्रीय बैंकको छ ।
मर्जरतर्फ प्रोत्साहनकै लागि केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्‍याइँदा मूलतः राइट सेयर, बोनस र एफपिओमार्फत तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्‍याएका थिए ।
लाखौँ सर्वसाधारणसमेतको लगानी भएका सयौँ शाखासञ्जालमा विस्तारित दुई वा सोभन्दा बढी संगठित संस्थाबीचको एकीकरण (मर्जर) सहज काम होइन । सञ्चालक समितिदेखि सबै स्तरका विभाग, शाखा, प्रशाखाको एकीकरण, सिइओदेखि फिल्ड कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापन, धितोपत्रको व्यवस्थापन र स्वाप रेसियो निर्धारण, दुवैको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषणलगायत यावत् विषयमा दुई पक्षको कुरा मिलेपछि मात्र मर्जरले मूर्त रूप पाउँछ । यी विषय विशेषगरी मर्जरको अवस्थामा पेचिलो बन्ने गरेका छन्, जुन एक्विजिसनको हकमा तुलनात्मक दृष्टिले कम चर्चामा रहन्छन् । यी यावत् विषयमध्ये मर्जरपछिको एकीकृत संस्थाको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को टुङ्गो लगाउनु मर्जर प्रक्रियाको अहम् चुनौती हो । यहाँ खासगरी विगतको अनुभवका आधारमा मर्जरपछिका सिइओको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
किन टिक्दैनन् मर्जरपछिको पहिलो सिइओ ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच केही ‘बिग मर्जर’ भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तत्कालीन ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच (दुवै वाणिज्य बैंक) को एकीकरण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर हो । यी दुईको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार ६ डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु भएको हो ।
मर्जरपछि बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल रहने सहमति भयो, जो हालसम्म पनि कायमै छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भने जनता बैंकको तर्फबाट पर्शुराम कुँवरलाई बनाइयो । चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुँवर देशकै ठूलो वाणिज्य बैंकको करिब सात महिनाको पाहुना मात्र बने ।
‘बिग मर्जर’को इतिहास तोडिने संकेत
यतिवेला ‘बिग मर्जर’को इतिहास तोडिने सँघारमा छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जर प्रक्रियामार्फत ग्लोबललाई उछिन्न निकै अघि बढिसकेका छन् । सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) का लागि दुवै बैंकले बनाएका कमिटीले रिपोर्ट बुझाइसकेका छन् । इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले डिडिए रिपोर्ट पारित गरिसकेको छ भने हिमालयन पारित गर्ने क्रममा छ । स्रोतका अनुसार मर्जरपछिको अध्यक्ष, सिइओ, नाम, स्वाप रेसियो, कर्मचारी समायोजनलगायत विषयमा दुवै पक्ष मोटामोटी सहमतिमा पुगिसकेका छन् । अब केही प्राविधिक पक्ष मिलाउने अन्तिम तयारी भइरहेकाले केही साताभित्रै मर्जर सम्झौता हुने स्रोतको दाबी छ । यसले मूर्तरूप पाएमा यो नै हालसम्मको बिग मर्जर बन्नेछ । मर्जरपछिको बैंकको चुक्तापुँजी साढे २६ अर्ब नाघ्नेछ । ग्लोबलको हालको चुक्तापुँजी करिब २१ अर्ब ६३ लाख छ ।
इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयनको सम्भावित ‘बिग मर्जर’मा पनि अध्यक्ष र सिइओमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मर्जरपछिको अध्यक्ष हालको इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे हुने र सिइओमा हालको हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक राणा रहने सहमति भएको छ । यी दुईबीचको मर्जर छलफल निष्कर्षमा पुगेमा र अध्यक्ष र सिइओबारे स्रोतको दाबी सत्य सावित भएमा नयाँ सिइओले कार्यकाल पूरा गर्न पाउलान् वा नपाउलान्, त्यो भने भविष्यकै गर्वमा छ । यद्यपि, हिमालयन बैंकको विकासमा विगतमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेको पनि सक्रिय योगदान रहेकाले उनको नेतृत्वमा मर्जरसम्बन्धी विगतका तिता अनुभव नदोहोरिन सक्ने मजबुत सम्भावना भने छँदैछ ।